Ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ihe ngosi diamond | China Diamond egweri efere Factory
Ihe mkpuchi diamond Lavina
Efere ọla diamond
diamond 7 inch okpukpu abụọ ahịrị ahịrị G...
4 ″ diamond mkpọchi Snail...
250mm Cyclone Diamond egweri efere maka ihe eji eme ala
Igwe a na-egweri diamond a maka igwe 250mm otu isi egweri ka emebere maka ịkụ ihe na ala terrazzo. Ejiri njirimara ọrụ dị elu yana ogologo ndụ mara.
10 inch 250mm Diamond Floor egweri diski maka ihe Terrazzo
Enwere ike itinye efere ihe na-egweri diamond na nnukwu nha, ala terrazzo iji wepụ epoxy, mkpuchi na gluu na ya. Ọmarịcha arụmọrụ yana dị mfe iji rụọ ọrụ. Agbụ dị iche iche dị na-egweri ala sink siri ike dị iche iche.
Ọrịre na-ekpo ọkụ 10 inch Concrete Floor Diamond egweri efere
10 metal bonded diamond egweri efere e mere nke ukwuu ike-ike egweri na ihe, epoxy, mastics, thinsers, mmiri mkpuchi mkpuchi na ndị ọzọ. Sistemụ bolts nwere ike ime ka etinyere efere diamond iri a dị 10 n'ọtụtụ akụrụngwa, dịka Edco, MK, Husqvarna na Blactrac.
Plate diamond Blastrac 10 inch maka egweri ihe
Nke a 20 Nkeji Concrete Floor-egweri Equipment Plate imewe na-enye ohere maka egweri na ezigbo slabs na ala. Na-ewepụ ihe mkpuchi ihe gụnyere resins na epoxies. Ha na-akpa ike ma na-adịgide adịgide.
10 inch Diamond Floor egweri efere maka Blastrac grinder
250mm Metal Bond Diamond egweri efere Wheel na-eji na elu ọkwa ulo oru diamond powders maka kacha egweri arụmọrụ na elu ndụ. emebere maka igwe ihe na iwepu epoxy, mastics, thinsers, mkpuchi mkpuchi mmiri.
Akụkụ akụ 250mm diamond Floor egweri diski
Emebere efere egweri iji nye ịrụ ọrụ kacha mma na nkwadebe kọmpat, ihicha elu kọnta na mwepụ nke mkpuchi dị iche iche dị mkpa. Anyị na-enweta teknụzụ nguzozi dị ike iji jide n'aka nkwụsi ike ya ka ọ na-arụ ọrụ n'okpuru ọsọ na-atụgharị dị elu.
10inch 250mm Concrete Floor Diamond Grinder Disc maka Blastrac Grinder
250 mm Concrete Floor Diamond Grinding Disc na-enye arụmọrụ dị elu na nhazi ala na polishing niile. Kwesịrị ekwesị maka ịrụzi ihe, nhazi ala. ahu.
9.5 ″ Klindex diamond egweri mgbanaka mgbanaka
9.5 "Diamond egweri mgbanaka Wheels e mere maka Klindex grinders na 6 agba ezé. Ọ bụ ike ike wepụ anya epoxy mkpuchi na ngwa ngwa egweri maka ụdị nile nke ihe, konkiri na marble floors.Sharp na-eyi resistant.Provide customization ọrụ iji mezuo ọ bụla pụrụ iche. chọrọ.
10 inch 250mm Super Aggressive Diamond egweri diski maka ala ihe
The 10" diamond egweri discs na-enye ọmarịcha ọrụ na-arụ ọrụ na niile n'ala nkwadebe ngwa: ihe nrụzi, n'ala flattening na mkpokọta ikpughe. Ọ na-dị na-arụ ọrụ na ụdị ọ bụla ụdị igwe na dị iche iche njikọ na ike ahaziri dị ka gị mkpa.
10 ″ 250mm Arrow Diamond Grinding Disc Abrasive Disc maka ihe siri ike
Plate / discs na-egweri diamond na-enye arụmọrụ kachasị elu n'ime ngwa preparatien ala niile gụnyere nrụzi kọmnta, ịgbasa ala na mkpughe mkpokọta. Ọ dịkwa na-arụ ọrụ na ụdị igwe niile nwere njikọ dị iche iche ma nwee ike ịhazi ya dịka mkpa gị si dị.
HTC Diamond Bush Hammer Roller Plate bụ maka ime ka ala dị elu siri ike na ala ndị na-adịghị na-amị amị dị ka litchi finishing.Exclusive e mere nkebi na-akpụ maka ọrụ ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike. The ohia-hammer rollers base nwere ike iji njikọ dị iche iche dabara na igwe dị iche iche.